मायामा उमेरको हद् हुन्न भन्नु कति सही ? | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
मायामा उमेरको हद् हुन्न भन्नु कति सही ?
एजेन्सी । मायाको कुनै उमेर हुँदैन भनिन्छ तर के यस्तो प्रेम वास्तविक जीवनमा पनि सफल हुन सक्छ ? ब्रिटेनका ६९ वर्षीय रोन सेर्फडले एक पछि अर्को गरि आठ पटक विवाह गरे र नवौँ विवाह गर्ने तयारीमा थिए । तर अचानक विवाहकै दिन उनकी प्रेमिका हराएपछि उनको जीवनले अर्कै मोड लिएको छ ।
रोनले ब्रिटेनमा सबैभन्दा धेरै पटक विवाह गरेर रेकर्ड समेत राखिसकेका छन् । अहिलेसम्म उनले आठ पटक विवाह गरेर आठौँ पत्नीसँग डिभोर्स समेत गरिसकेका थिए । त्यसपछि गत दुई वर्षदेखि उनी आफ्नो आधा उमेर भन्दा कमकी युवतीसँग सम्बन्धमा रहेका थिए । तर २८ वर्षीया क्रिस्टल उनीहरुको विवाहकै अघिल्लो दिन अचानक गायब भइन् । पछि मात्र रोनले उनी अर्कै पुरुषसँग भागेको थाहा पाए । यसले रोनको मनमा ठूलो चोट पुगेको उनले बताएका हुन् । उनलाई आफ्नी नवौँ पत्नी बन्न लागेकी क्रिस्टलले जीवनभर साथ दिन्छिन् भन्ने विश्वास थियो । तर, क्रिस्टलले अरुसँगै भागेर रोनलाई एक्लै पारिदिएकी छन् ।
उनीहरु सम्बन्धमा रहेको दुई वर्ष पूरा भइसकेको हुनाले रोनले क्रिस्टललाई अत्यन्तै माया गरेको रोन बताउँछन् । रोनसँग क्रिस्टल फिलिपिन्समा छुट्टी मनाइरहेका बेलामा रोनले उनलाई विवाहको प्रस्ताव गरेका थिए । यसभन्दा अघि आठजनासँग विवाह गरिसकेका रोनका आठ छोराछोरी छन् । क्रिस्टल उनका जेठा छोरा भन्दा कम उमेरकी हुन् । अहिले क्रिस्टल भागिसकेपछि मात्र रोनले उनको अन्त पनि सम्बन्ध रहेको आभास गरिरहेका छन् । उनका अनुसार उनीहरु जतिसुकै नजिक भएपनि क्रिस्टलले आफूलाई कहिल्यै छुन दिन्न थिइन् । तर रोनले भने उनको मन जित्न सधैँ महङ्गा उपहार दिने गरेका थिए । अन्त्यमा मात्र रोनले क्रिस्टलले आफूलाई मूर्ख बनाएको चाल पाएको बताएका छन् । प्रेममा अन्धा भएका रोन यत्तिका वर्षसम्म पनि क्रिस्टलको वास्तविक नियतबारे अन्जान थिए ।